Aabaha dhalay gabadh u dhimatay dhiig bax ayaa difaacaya gudniinka fircooniga ah - BBC News Somali
Aabaha dhalay gabadh u dhimatay dhiig bax ayaa difaacaya gudniinka fircooniga ah
Aabaha dhalay gabadh 10 jir ah oo u dhimatay dhiig bax kadib markii lagu sameeyay gudniinka fircooniga ah ayaa difaacaya caado dhaqameedkan laga dayriyay.
Daahir Nuur ayay gabadhigiisa dhiig bax u dhimatay 17-kii bishan Luuliyo, 2 maalmood uun kadib markii lagu sameeyay gudniinka fircooniga ah oo ah caado dhaqameed facweyn, balse la'isla waafaqay in ay tahay halis weyn.
Sida ay sheegtay hay'adda UNICEF, 98% boqolkiiba dumarka iyo gabdhaha ku nool Soomaaliya ayaa lagu sameeyay gudniinka fircooniga ah.
Sawirro : Dumarka Sucuudiga oo baranaya kaxeynta baabuurta
Dr Cabdiraxmaan Cumar Xassan oo ah agaasimaha isbitaalka Xanaano ee magaalada Dhuusamareeb ayaa VOA-da u sheegay in uusan waligiis arag qof bini'aadam ah oo xubintiisa taranka sidaas loo jarjaray.
Aabaha dhalay gabadha ayaa sheegay in uusan ciddina wax u raacan doonin, wax dacwad ahna ku furi doonin dadkii mas'uulka ka ahaa gefka dhacay.
Xaawo Aaden Maxamed oo ah agaasimaha hay'adda GECPD ee Gaalkacayo oo arrimaha dumarka qaabilsan ayaa sheegtay in xitaa haddii lasoo xiro dumarkii gudniinka sameeyay in aysan wax micno ah samaynaynin, maadaamaa aysan jirin shuruuc degan oo lagu maxkamadayn karo. Waxaa hadalkaasi kasoo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters.
14 Abriil 2017